5 Atụmatụ N'ihi ejegharị Site Train Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Atụmatụ N'ihi ejegharị Site Train Na Europe
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 18/02/2020)
Lee ma ahụmahụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ site na amalite a European ụgbọ okporo ígwè njem. Ejegharị ụgbọ okporo ígwè na Europe bụ quintessential usoro agaa leta Europe na ọ bụ ọ omimi mere. The okporo ígwè netwọk bụ oké mepụtara mere njem nwere ike imeri multiple mba na omenala otu The Epic njem. Dị ka ihe ọ bụla n'ụdị nke njem, ọ dị mma iji kwadebe onwe gị iji hụ na i nwere ndị kacha na ọtụtụ na-atọ ụtọ na njem o kwere omume. Ebe a na-anyị 5 Atụmatụ maka njem ụgbọ okporo ígwè na Europe.
Ọ bụrụ na Ị Travel Karịsịa 14 Days – Nchọnchọ iche iche okporo ígwè gafee
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ahụ ọtụtụ mba mgbe ejegharị ejegharị ụgbọ okporo ígwè na Europe, ọ pụrụ ịbụ ihe amamihe dị na tụlee etinye na ihe Interrail Pass, ma ọ bụ ihe na-abụghị EU ụmụ amaala na-akpọ Eurail. An Interrail Pass ga-eme ka gị ụgbọ okporo ígwè njem Dị mfe karịa. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị bụ na a tighter mmefu ego, onye tiketi nwere ike na-arụ ọrụ dị ọnụ ala karịa (karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-tumadi-ejegharị ejegharị n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Germany). Tụlee gị ego ma na-eme nnyocha tupu ị akwụkwọ gị okporo ígwè ngafe. Our website saveatrain.com bụ zuru okè n'ebe na-amalite iji nyere Akpara gị njem gafee Europe.
Gbalịa na-edebe oche
gbaa ụgbọ okporo ígwè na oche abụọ abụọ dị iche iche ihe. A tiketi-enye gị ohere ịbanye a ụgbọ okporo ígwè, na a ndoputa emesi gị a oche na a kpọmkwem ụgbọ okporo. tupu gị na njem jide n'aka na ị na-aghọta ma gị na ụgbọ okporo ígwè na-achọ, na-atụ aro, ma ọ bụ adịghị anabata oche abụọ.
Ọ bụrụ na ọ kwe omume, agbalị na-edebe oche gị, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị na über ewu ewu mba ndị dị ka France, Italy ma ọ bụ Spain. N'ihi na ọtụtụ na-ejegharị site na ụgbọ okporo ígwè na Europe, ị na-achọrọ na-edebe oche gị, Otú ọ dị, -abanye ụgbọ okporo ígwè na-enwe olileanya maka nke kacha mma abụghị a ezi echiche. Ị nwere ike na-gwara esi na oche gị n'etiti njem ma ọ bụrụ na onye ọzọ gbaa akwụkwọ ya. Site-edebe gị ebe, ị nwere ike họrọ ma ị ga-achọ ihe wara wara ma ọ bụ window oche. I nwere ike na-anọdụ azụ na-enwe ụgbọ okporo ígwè maara na ị ga-enweghị ike ịhapụ mewe ịkwaga.
Buru ihe i nwere mma
Ejegharị ụgbọ okporo ígwè na Europe a maara dị ka otu n'ime kasị dịrị nchebe ụzọ njem. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka na-anya maka pickpocketers, karịsịa na ụgbọ oloko na-akwụsị na isi obodo. Ahapụla akpa gị echeghị echiche na ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ na ebe. on n'abalị ụgbọ oloko, ma ọ bụrụ na i bu n'obi na-ehi ụra, na-eme ka n'aka na iji nwetara ibu na ogbe na a obere ígwè mkpọchi. Iji nwee udo nke uche, eyi a n'úkwù mkpọ uwe gị ka ị na-paspọtụ, ekwentị na ihe ọ bụla mkpa akwụkwọ na-echebe site ọ bụla nwere ohi.
Naa bụ ọzọ – Atụmatụ maka njem ụgbọ okporo ígwè na Europe
na-aga site mba ma ọ bụ n'obodo ukwu ruo n'obodo bụ a fun na-akpali akpali njem. Otú ọ dị, njem pụrụ ịghọ agwụ ike ma ọ bụrụ na ị na-ebu a ibu arọ. Abịa dị mkpa na-ahapụ ihe ọ bụla ma ọ bụ na ngwaahịa na-adịghị mkpa n'azụ.
Dabere na ụgbọ okporo ígwè na ị na-ejegharị ejegharị na, e nwere ike ole na ohere nchekwa na n'elu oche racks na shelves mgbe ejegharị ejegharị ụgbọ okporo ígwè na Europe. Kama ebu a nnukwu na arọ akpa akwa, a quality fechaa azu paaki bụ ụzọ ọzọ isi mee gị ibu.
Ejegharị ụgbọ okporo ígwè na Europe na-enye na-akpali akpali echiche; Otú ọ dị, ọ bụ ezi echiche iji mee ka a ole na ole isi ihe na-enyere gị aka gafere oge karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-amalite a njem ya karịrị 2 awa. Gụọ a akwụkwọ, mgbe a nkiri gị mbadamba, dee njem gị magazin ma ọ bụ malite mkparịta ụka ọzọ njem na n'iru ị maara na ọ na ị ga-abụ na gị ọzọ ebe.
Most trains have either a restaurant, Cafe e ji ebu ihe ma ọ bụ nri-adọkpụ na-abịa site na-ere sandwiches, mmanya ọtọ bịrịbịrị na ndị ọzọ. Ma ọ bụrụ na ị bụ na a uko ejegharị ejegharị mmefu ego ma ọ bụ i nwere kpọmkwem dietary chọrọ, ọ bụ ihe amamihe ka ọ kpọta ụfọdụ snacks gị na njem gị.
Na-eche echiche nke na-ejegharị ejegharị ụgbọ okporo ígwè na Europe? gaa Zọpụta A Train online lelee niile anyị nanị n'ego ụgbọ na-amalite na-eme atụmatụ gị ọzọ njem!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-tips-for-traveling-by-train-in-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / ru na / es ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.
ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ traveltips